Abafundi baseMUT bafuna kuvunyelwe bonke abafundi babhalise - Bayede News
Isithombe: EFF Twitter
NgoLwesibili kuqubuke umbhikisho eMangosuthu University of Technology (MUT) eMlaza abafundi befuna ukuthi bonke abakweleta imali yokufunda bavunyelwe ukuba babhalisele unyaka wokufunda omusha.
Kuphoqeke ukuthi ingxenye yomgwaqo oseduze kwalesi sikhungo uMangosuthu Highway ivalwe njengoba abafundi bebeshisa amathayi phambi kwamasango ale Nyuvesi.
UMengameli womkhandlu wabafundi kulesi sikhungo uMnu uMthokozisi Gumede uthe: “Isikole asifuni ukukhipha imiphumela yabafundi ngenxa yokuthi bayakweleta, thina njengomkhandlu sithi isikole asinikeze abafundi izicucu zabo kanye nemiphumela khona bezokwazi ukuyofuna imisebenzi bathole nokusebenza befunda umsebenzi ukuze bezokhokhela isikole. Njengomkhandlu sithi abafundi abathole amaLaptop abo khona bezokwazi ukuqala izifundo, siphinda sithi abafundi asebegogodile kodwa abasaqhubeka befunda isikole asibavumele ukuthi babhalise ngoba abanayo imali bebekade besebenzisa eyesikhwama iNational Student Financial Aid Scheme (NSFAS) manje bafuna ukuqhuba izifundo zabo ngoba uma uneDiploma kuphela awukwazi ukuqashwa.”
Isikhungo sona sithi ezinye zezikhalo kade bavumelana ngazo ikakhulukazi esabafundi asebaqeda ukufunda ukuthi bathole incwadi eqinisekisa ukuthi bafundile futhi bangakwazi ukuyofuna ngayo umsebenzi.
UDkt uJohan Van Koller obambe njengeSekela likaShansela kulesi sikhungo uthe: “Kusukela ngowezi-2019 savumelana nabafundi ukuthi labo asebeqedile bazonikezwa incwadi yemiphumela, kuyasimangaza ukuthi lokho kusaphakanyiswa njengenkinga ngoba lolo hlelo namanje luyasebenza.”
Akaphumelanga obala ngezinye izikhalo zabafundi. Izinkinga ezibhekene nalesi sikhungo akuzona ezabafundi kuphela kepha nezisebenzi njengoba ezinye zibhikishe kanye nabafundi zifuna ukwenyuselwa imiholo. Izisebenzi zifuna ukwenyuselwa ngama-8% kanti umqashi uzinika ama-3,3%.
Ngawo uLwesibili kuphume izindaba ezinkundleni zokuxhumana zokuthi abanesifiso sokwenza izifundo zobuthishela bangaya eDurban University of Technology (DUT) eRiverside, eMgungundlovu, bazolekelelwa. IDUT ikhiphe isitatimende ngoLwesithathu esithi lowo mbiko ungamanga. Bathi lezi zindaba ezingamampunge ziphoqe ukuba kumiswe uhlelo lokwelekelela ukubhalisa ngobuchwepheshe labo abanesifiso sokufunda kulesi sikhungo. Lesi sitatimende sithi kunabantu abaningi abetheleke kulesi sikhungo nobekuwukwephula imigomo yokhuvethe.
Khona eRiverside, ngoLwesithathu kuqubuke umbhikisho esangweni lalesi sikhungo lapho kutholane khona phezulu amalungu e-EFF Student Command naweSASCO.
UGatsheni unxuswe ukuba esule esikhundleni sokusekela iMeya eMadlangeni
Abe-EFF Student Command bebefuna ukuthi abazokwenza iHigher Certificate bavunyelwe ukuba benze iDegree kanti iSASCO ithi abafundi abaqale benze iHigher Certificate kuyima bedlulela kuDegree njengoba kwenzeka namanje. Omunye we-EFF Student Command uzwiwe elaboHlanga ememeza iSASCO ethi: “Nidayisa ngathi nina, nadayisa izwe lethu.”
UNks uKhanyiso Caluza oyokwenza unyaka wokuqala eDUT uthe akutshelwe kulesi sikhungo omunye osesigungwini esiphezulu sabafundi ukuthi angakhokha izi-R4 200 ukuze akwazi ukubhalisa noma alinde isikhwama iNSFAS okusho ukuthi kunamathuba amakhulu okuthi isikhala sakhe sihambe.
“Manje angazi ukuthi ngizoyithatha kuphi le mali ngoba njengoba ngifuna uxhaso nje ingoba umzali wami oyedwa enginaye akasebenzi,” kusho uKhanyiso.